Waxaa qoray admin on 21-07-08
Bishii Juun 25, 2021, Shirkadda SIBO waxay u qabatay tababar xirfadaha samatabbixinta degdegga ah ee khadka tooska ah dhammaan shaqaalaha. Tababarkan, shaqaalaha SIBO waxay ku barteen qaar ka mid ah xirfadaha aasaasiga ah ee samatabbixinta xaaladaha degdegga ah aragti ahaan iyagoo si wada jir ah u daawanaya fiidiyowyada. Dhinaca, waxaa la rajeynayaa in shaqaalaha ...
Dariiqa Saxda ah ee Loo Cabbo Biyaha Loogu Raaco Banaanka
Celceliska cabirka biyaha caadiga ah ee ragga caadiga ah waa qiyaastii 60%, biyaha haweenku waa 50%, biyaha cabbirka ciyaartooyda heerka sare waxay kudhowyihiin 70% (maxaa yeelay muruqyada biyaha waxay gaarayaan 75% sidoo kale biyaha baruurta waa 10% kaliya). Biyuhu waa qaybta ugu muhiimsan dhiigga. Waxay awoodaa ...
Shan Khatar oo Ciyaaraha Dibedda ah
Buuraha iyo deegaannada kale ee dabiiciga ah, waxaa ka jira arrimo qatar ah oo kala duwan, oo sababi kara hanjabaado iyo dhaawac soo gaara dadka fuula markasta, taasoo horseeda musiibooyin buuro kala duwan. Aynu wadajir u qaadno tallaabooyin ka hortag ah! Inta badan xiisaha cayaaraha dibadda waxay leeyihiin khibrad la'aan iyo saadaal la'aan ...
Isbeddel Ku Samee Waqti Iyo Horumar Waqti leh
The 2021 Guga / Xagaaga Noodle Qalabka Bandhigga ayaa si weyn loogu furay Xarunta Shirarka Qaranka iyo Carwada ee Shanghai. Soo bandhige ahaan bandhigan, SBS waxay raadineysaa horumar guud oo lala yeesho asxaabta warshadaha. Markan, qaabka bandhigga SBS waa mid fudud oo Nordic ah. Qaabka guud wuxuu adeegsadaa ...
Tilmaamaha Ciyaaraha Dibadda ee Faafida
Jimicsiga bannaanka ee habboon wuxuu hagaajin karaa caafimaadka wuxuuna hagaajin karaa tayada nolosha. Si kastaba ha noqotee, cudurka faafa ee cusub ee hadda jira ee pneumonia ayaan si buuxda u gudbin. Xitaa haddii aadan u dulqaadan karin inaad dabeecadda qaadatid, waa inaad taxaddar u baxdid oo aad taxaddar yeelataa. Aan idinla wadaago qaar ka mid ah taxaddarrada dib-u-dhaca ...
Dad badan ayaa is weydiin doona, sideen ku noqon karaa ilaah banaanka? Hagaag, waa inay qaadataa waqti in si tartiib tartiib ah loogu soo uruuriyo. In kasta oo ilaaha dibedda uusan dhaqso badan karin, laakiin waxaad baran kartaa xoogaa aqoon ah oo qabow oo dibadda ah oo kaliya uu ogyahay ilaah dibadda ah, bal aan eegno, waad taqaanaa kuwa! 1. Ha c ...
Shirka Tababarka Aadaabta Ganacsiga SIBO ee Shaqaalaha
Galabnimadii Juun 9, 2021, dhammaan shaqaalaha waaxda suuqgeynta ee SIBO waxay ku qabteen kulan tababar tababar anshax ganacsi hoolka shirarka ee dabaqa afraad. SIBO waxay ku casuuntay macalinka caanka ah Liu Yuhua inuu u sharaxo shaqaalaha. Tababarkan, Mrs. Liu put f ...
Dib-u-Celin Lagu Sameeyay Weelka Weelka iyo Celceliska Qiimaha Dhoofinta
Sida laga soo xigtay xogta Wasaaradda Gaadiidka, baahida loo qabo suuqyada dhoofinta konteynarrada ee Shiinaha ayaa sii kordheysay 2021. Isla mar ahaantaana, yaraanta booska iyo yaraanta konteynarrada faaruqa ah ayaa horseeday sameysashada suuqa iibiyaha. Heerarka xamuulka jaale ee r ...
Isboortiga banaanka ee firfircoon, qaab nololeed firfircoon oo caafimaad leh, waxay xambaarsan tahay aragti rajo leh oo xagga nolosha ah, waana muujinta raadinta ruuxiga ah ee dadka. Kaliya maahan inay kobciso shucuurta, waxay kordhisaa aqoonta, weyneeysaa maskaxda, jimicsataa, waxayna soo nooleysaa jirka iyo maskaxda, laakiin sidoo kale waa ...
Shirka Amaanta Shaqaalaha Sibo
Bishii Meey 4teedii, waan isla kulanay oo waxaan ku qabannay kulan aad u wanaagsan oo lagu amaanayo shaqaalaha Shirkadda Sibo. Shirkadda Sibo, waxaa ka soo baxay dhowr shaqaale oo heer sare ah. Waxay ku isticmaaleen shaqadooda adag iyo dhididka inay gurtaan miraha shaqada iyo ammaanta. Isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale ku faanaan inay yihiin Sibo per ...